Pane zvakawanda zvekutaura kana zvasvika pakuita email kushambadza zvakanaka.
Isu taigona kutaura kwemazuva nezve iyo inonyanya kukosha zvikamu zveemail yakanyatsogadzirwa, zvakajairika email kushambadzira zvikanganiso iwe unogona kunge uri kugadzira, uye mienzaniso ye brilliant email yekushambadzira izvo zvinokukurudzira.
Asi pakupera kwezuva, hazvina basa kuti maemail ako akagadziriswa sei kana iwe usingaone mhedzisiro yekuedza kwako - tisingataure chiyero kana email iri kukubatsira kurova zvinangwa zvako.
Saka usati watumira yako inotevera email, imbomira kwemaminetsi mashoma uye zvibvunze pachako: "Ndechipi chinangwa cheayo email kushambadzira?"
Iko kukura database inonyoresa? Kugadzira mamwe anotungamira? Kuchinjana mamwe aripo anotungamira muvatengi?
Chero chaunosarudza chinangwa chako chiri (uye newe anogona une zvinopfuura imwe), chinotevera chinhu chaunofanirwa kuita kuona kuti ndeapi mameturu auchazoda kuteedzera kuti uone kuti uri kufambira mberi sei kuenda kuchinangwa ichocho.
Ngatitarisei metric iwe yaunofanirwa kunge uchiteerera mune yako email kushambadzira kuyedza. Tichatanga nema metric ose email mushambadzi inofanirwa kunge ichiteedzera, uye tobva tatarisa maitiro ekusunga mamwe metric kune ako chaiwo zvinangwa.
Zvazviri: Ipesenti yeavo vanogamuchira email avo vakadzvanya pane imwe kana kupfuura zvidhori zvirimo mune yakapihwa email.
Maitiro Ekuverenga (Zvekare zvokudzvanya AU zvakasarudzika kubaya
muenzaniso: 500 yakakwana yekudzvanya ÷ 10,000 anounza maimeri * 100 = 5% kudzvinyirira mwero
(Uchishandisa chero zvirevo zvakazara kana zvakasarudzika pakuverenga apa pamusoro zvinoshanda, chero iwe uchishandisa maitiro mamwe iwowo.)
Clickthrough rate (CTR) ingangoita mhinduro yekutanga iwe yaunowana kana iwe ukabvunza mutengesi weemail kuti ndeapi metric avanoteedzera. Ndo zvandiri kudaidza iyo "zuva nezuva-zuva" email kushambadza metric, nekuti inokutendera iwe nyore kuverenga mashandiro kune yega email email yaunotumira. Kubva ipapo, iwe unogona kuteedzera kuti yako CTR inochinja sei nekufamba kwenguva.
CTR inoshandiswawo kazhinji pakutsvaga mhedzisiro yeA / B bvunzo, sezvo idzi bvunzo kazhinji dzichigadzirwa nechinangwa chekutsvaga nzira nyowani dzekuwana machekeresi mumaemail ako.
Chiyero chakakosha sei kuwanda?
Clickthrough chiyero chakakosha kwazvo metric kune vese email vatengesi kuti vatevedzere, sezvo inokupa yakananga kunzwisisa kuti vangani vanhu pane yako runyorwa vari kuita nezvako zvemukati uye vanofarira kudzidza zvakawanda nezvechiratidzo chako kana chawakapiwa. Verenga iyi blog post kuti udzidze kuti chii "chakanaka" chinobaya mwero, maererano neindasitiri mabhenji.
(HubSpot customers: Dzvanya apa kuti udzidze maitiro eku nyore kumisikidza tinya tinoteedzera mumaemail ako uchishandisa HubSpot.)
2. Kutendeuka Rate
Zvazviri: Iyo muzana yevanotora email vakadzvanya pa link mukati meemail uye vakapedza danho raunoda, sekuzadza fomu yekutungamira yechizvarwa kana kutenga chigadzirwa.
Maitiro Ekuverenga (Chiverengero chevanhu vakapedza chiito chaunoda of Nhamba dzemaema ese akaunzwa) * 100
muenzaniso: 400 vanhu vakapedza yavanoda chiito ÷ 10,000 yakazara email yakatumirwa * 100 = 4% shanduko yekutendeuka
Mushure mekunge mugashiri weemail abaya paemail yako, chinangwa chinotevera ndechekuti vatendeuke paunopa - mune mamwe mazwi, kutora danho rakakumbirwa neemail yako. Saka kana iwe uri kutumira email kuti upe vateereri vako mukana wekurodha pasi, iti, yemahara ebook, iwe ungafunga chero munhu anonyatsotora iro bhuku kuti rive shanduko.
Nekuti dudziro yako yekushandurwa yakasungirirwa zvakananga kudanidziro-ku-chiito muemail yako, uye yako yekudaidzira-chiito inofanirwa kuve yakasungirirwa yakanangana nechinangwa chakazara chekushambadzira kwako email, chiyero chekushandura ndiyo imwe yematanho akakosha e kuona danho rauri kuzadzisa zvinangwa zvako. (Tichakurukura mamwe metric ane chekuita nechinangwa gare gare.)
Kuti uone kuyera kutendeuka paemail ako, iwe unofanirwa kusanganisa yako email chikuva uye yako yewebhu analytics. Unogona kuita izvi na kugadzira yakasarudzika yekutsvaga ma URLs eemail yako maratidziro inozivisa iyo kunobva kunongedza seinouya kubva kune chaiyo email yekumhanyisa.
Yako yakakosha sei shanduko yako?
Kana chinangwa chako chiri chekuburitsa zvinotungamira, shanduko yekutendeuka chakakosha zvakanyanya sezvavanokuratidza kuti zvinobudirira sei tsamba dzako dzepepanhau dziri kuunza tarisiro uye inotungamira.
3. Bvisa Rate
Zvazviri: Iyo pesenti yemamwe maemail ako akatumirwa ayo asingakwanise kuendeswa zvinobudirira kubhokisi rekugamuchira.
Maitiro Ekuverenga (Chiverengero chakazara cheemaimendi akashatirwa ÷ Nhamba dzeemail yakatumirwa) * 100
muenzaniso: 75 bounced emaema ed zviuru gumi nemaimeri zvakatumirwa * 10,000 = 100% bounce rate
Kune marudzi maviri emabhuru ekuteedzera: "akaoma" mabhero uye "akapfava" mabhende.
MaSoft bounces ndiwo anokonzeresa dambudziko rechinguva nekero reemail rakakwana, senge bhokisi rakazara mubhokisi kana dambudziko nedhawero yeanogamuchira. Seva yeanogamuchira inogona kubata maemail ekutumira kana dambudziko ratanga, kana kuti ungayedza kutumira zvekare email yako meseji kune zvinyoro nyoro.
Mabhiza akaomeswa ndiwo mhedzisiro yekero isina kuvharwa, yakavharwa, kana isipo, uye maemail aya haasati achizotumirwa. Iwe unofanirwa kubvisa pakarepo kero dzakaoma kubva kune yako email rondedzero, nekuti internet ibasa varidzi (ISPs) shandisa mabheji mitengo seimwe yezvinhu zvakakosha kuti uone mukurumbira weemail.
Chiyero chakawanda sei chekubhadhara?
Nepo bounce rate isingaite sekubatana zvakananga kune zvinangwa zvako, iwe unofanirwa kuramba uchizvitarisa kuti uone kuti hapana nyaya dzakadzama nemaemail ako. Kuva neakawandisa akawanda mabhureki anogona kuita kuti kambani yako iratidzike senge spammer mumaziso eIP. Verenga iyi blog post kuti udzidze zvakawanda nezve mutsauko pakati peakaoma uye akapfava bounces.
4. Rondera Kukura Rate
Zvazviri: Chiyero icho chako email email chiri kukura.
Maitiro Ekuverenga ([(Nhamba yevanonyoresa vatsva) minus (Nhamba yevasina kunyora + email / zvinyunyuto zve spam)] ÷ Nhamba dzese dzekero dze email pane rako runyorwa]) * 100
muenzaniso: (Vanyoreri vatsva mazana mashanu - zana vasinganyore uye mameseji eemail / spam) ÷ 500 kero dzeemail pane runyorwa * 100 = 10,000% runyorwa rwekuwedzera chiyero
Kunze kwekufona-ku-chiito metric (CTR, shanduko mitengo), iwe zvakare unenge uchidawo kuve unochengeta tabo pane yako runyorwa kukura uye kurasikirwa. Ehezve, iwe unofanirwa kuve uchivavarira kukura runyorwa rwako kuti uwedzere kusvika kwako, wedzera vateereri vako, uye uzviise pachezvako seindasitiri inofunga mutungamiri.
Yakakosha sei yako rondedzero kukura mwero?
Zvitende kana kwete, pane kuora kwechisikigo kweako email email rwekushambadzira, uye inopera neinenge 22.5% gore rega rega - zvinoreva kuti zvakakosha kupfuura nakare kose kuti utarise kukura kwebhuku rako revanyori uye nekurichengeta riine saizi rine hutano.
5. Email Kugovana / Kutumira Mutero
Zvazviri: Huwandu hwevanotora email vakadzvanya pa "share izvi" bhatani kuti utumire email zvemukati pasocial network, uye / kana iye akadzvanya pane "pamberi shamwari" bhatani.
Maitiro Ekuverenga (Nhamba yekudzvanya pane yakagoverwa uye / kana bhatani remberi ÷ Nhamba yeemairi akaunzwa emaema) * 100
muenzaniso: 100 kudzvanya pane yakagoverwa / mberi bhatani ÷ zviuru gumi akaiswa maimeri * 10,000 = 100% email kugovana / kutumira chiyero
Chiyero icho vatambi vako veemail vanoendesa kumberi kana kugovana email yako nevamwe chingasaita kunge chakakosha, asi zviri pachena kuti ndeimwe yemametric akakosha aunofanirwa kuteedzera.
Sei? Nekuti iyi ndiyo nzira yaunogadzira itsva vanofambidzana. Ivo vanhu pane yako email rondedzero vatove mune yako dhatabhesi. Saka kunyangwe shanduko ichiri chekutanga kutarisa, izvi hazvibatsire iwe kukwezva itsva inotungamira. Kurudzira vaverengi vako kuti vapfuure neemail yako kushamwari kana shamwari kana vakawana izvo zvirimo zvichibatsira, uye tanga kutsvaga kuti vangani vanhu vatsva vaungawedzera kune dura rako nenzira iyi. Verenga iyi blog post kuti uwane mazano ekuti vanhu vatumire maemail ako.
Nei Email Kugovera uye Kutumira Mitero Yekukosha
Chengetedza ziso pamitero yako yekugovana kuti uone kuti ndedzipi mhando dzezvinyorwa uye zvinopihwa zvinowanzogovana zvakanyanya, uye shandisa nzwisiso iyo paunoronga email yekushamidzira mune ramangwana.
6. Pamusoro pe ROI
Zvazviri: Iyo yekudzoka kuzere mukudyara kune yako email macampaign Mune mamwe mazwi, mari yakakwana yakaganhurwa nemari yakazara.
Maitiro Ekuverenga [($ $ mukuwedzera kwekutengesa yakaita kuti minus $ yakawedzerwa pamushandirapamwe) ÷ $ yakaiswa pamushandirapamwe] * 100
muenzaniso: ($ 1,000 100 mukutengesa kwekuwedzera - $ 100 yakadyarwa mumushandirapamwe / $ 100 yakaiswa mari mumushandirapamwe) * 900 = XNUMX% inodzoka mukudyara mushandirapamwe
Iyi ndiyo yakakosha nzira yekuverenga ROI - asi pane nzira dzinoverengeka dzekusvika pakuda kuverenga iyo ROI yeemail Campaign yako. Zvichienderana nerudzi rwebhizinesi rako, unogona kusarudza rimwe rakasiyana.)
Sezvo neyese nzira yekushambadzira, iwe unofanirwa kugona kuona iyo yakazara ROI yeemail yako kushambadzira. Kana usati, seta SLA system iyo iwe yaunopa akasiyana maitiro kune akasiyana mhando dzevatungamiriri zvichibva pamukana wavo wekuunza mari kukambani yako.
Yakakosha sei ROI?
Vangani pane imwe yeaya emhando idzi dzekutungamira iwe dzaunogadzira kuburikidza neemail kushambadzira? Izvi zvinoshandura sei kune angangoita mari? Mari chaiyo? Idzi ndidzo mhando dzemetrics idzo dzinokubatsira kuratidza wako bhosi uye timu yako yekutengesa kuti kwakakosha sei kushambadzira email sechiteshi chinofambisa chaicho, chiitiko chinooneka.
7. Vhura Rate
Zvazviri: Iwo muzana wevanogamuchira email vanovhura email yakapihwa.
Vazhinji vatengesi veemail vachiri kukotama neshure vachiedza kukwidziridza yavo tambo mitsara yepamusoro yakazaruka mitengo. Kunyangwe izvi zvichigona kuve nemhedzisiro - uye kuvhura kwakawanda chiri chinhu chikuru - ivo vanofanirwa kunyatso tarisa mukugadzirisa yavo yekudzvanya mitengo, pachinzvimbo.
Icho chokwadi chenyaya ndechekuti yakavhurika mwero iri chaizvo inotsausa kwazvo metric nekuda kwezvikonzero zvishoma. Kunyanya kukosha, email inongoverengerwa se "yakavhurwa" kana iye anogamuchira achigamuchirawo mifananidzo yakaiswa mune iwo meseji. Uye yakakura muzana yevashandisi vako veemail vangangove vane-yekuvharira mifananidzo inogoneswa kune yavo email mutengi. Izvi zvinoreva kuti kunyangwe vakavhura iyo email, ivo havazosanganisirwe muyero yako yakavhurika, ichiita iyo isiriyo uye isingavimbike metric yevatengesi, sezvo ichinyora pasi panhamba dzako dzechokwadi.
Yakakosha sei yako email kuvhura?
Iwe unogona kuwana imwe kukosha kunze kweyakavhurika seti kana iwe ukaishandisa se enzanisa metric. Semuenzaniso, kana iwe ukafananidza mitengo yakavhurwa yeemail yevhiki ino inotumirwa kuemail yevhiki rapfuura kutumira (zvese kune iwo mamwe mazita) zvinogona kukupa imwe nzwisiso sezvo misiyano yakati wandei inodzorwa.
8.Sina kunyoresa Rate
Zvazviri: Iyo muzana yevanogamuchira email vanonyora kubva pane yako yekutumira runyorwa mushure mekuvhura email yakapihwa.
Sezvineiwo neyakavhurika mwero, iyo yekusaina kunyoresa haisi yakavimbika mufananidzo wehutano hwe email yako runyorwa. Vazhinji vanyoreri vakaneta nekugamuchira email mameseji kubva kune yako chinyorwa havazonetseke kuenda kuburikidza neyakajeka kunyoresa maitiro. Ivo vachangomira kuvhura, kuverenga, uye kudzvanya pane yako email mameseji.
Ndicho chikonzero nei zvichinyanya kushanda kuyera munhu anenge achinyoresa kubatanidzwa nematanho kuburikidza nemitero uye nemitengo yekutendeuka. Kubva ipapo, unogona chengetedza ziso kune vasina kunyoresa saka unogona kufunga nezvekuvabvisa pane imwe nguva, sezvatakamboita pakutanga.
Yakakosha sei chiyero chisina kunyoreswa?
Kunyangwe yako yekuzvinyora rate isinganane zvakananga nezvinangwa zvako, kuitarisa pamwedzi is inobatsira pakuverengera yako yega rondedzero chiyero kukura. Saka, ramba uine ziso pazviri nguva nenguva.
Nzira yekuziva sei Iyo Email mahetri ekutevedzera, Kubva pane Zvinangwa zvako
Chinangwa chekushambadzira chako cheemail chinogona kunge chakasiyana zvakanyanya nezvinangwa zveimwe kambani senge yako, uye zvinogona kutosiyana mukati mekambani yako nekufamba kwenguva. Asi zvakare, zvakakosha kuti iwe uone chaizvo zvauri kutsvaga kuti uwane neemail yako kushambadzira usati watanga (kana kuenderera) kutumira uye kuyera maemail ako.
Heano maitiro aungaenzanisira yako chaiyo chinangwa neakakosha metric.
Vanyoreri Chinyorwa Kukura Muenzaniso
Kana yako yekutarisa iri pakukura pamusoro penzvimbo yako - kukwezva vamwe vashanyi kune yako saiti, kusaina vazhinji vanyoreri blog, kutora vanhu vazhinji kushandisa ako emahara maturusi, icho chinhu chechinhu - chako chinangwa chingangove chiri kukura yako vanonyorera rondedzero. Emaimeri ako anogona kunge aine mafoni-kune-chiito senge "Nyorera kuBlog Redu" kana "Joinha Yedu Yevhiki nevhiki Email Rondedzero." Saka pachokwadi, metric yakakosha iwe yaunofanirwa kunge uchiteedzera kune ichi chinangwa chiyero chekukura kwerunyorwa rwako runyorwa. (Verenga iyi blog yekutumira kuti uwane mamwe mazano ekuti ungakura sei iwe wevanonyoresa zvinyorwa.)
Vanyori vasina kubhadharwa
Sezvo iwe zvaunoda kuteedzera uye kukura vako vanyoreri, zvakakoshawo kuti utarise kune vako vasina kunyoresa vanyori - uye funga kuvabvisa kubva pane yako runyorwa zvachose. Sei? Nekuti kutumira maemail kune vanhu vasina kufambidzana nemaemail ako (anonzi "greymail") kunogona kukuvadza kuendesa kweemail zvako. Vatengi veemail vanogona kubvisirwa mari nemitengo yepasi yekubata uye kuendesa email kubva kune vanozivikanwa-greymail vanotumira vakananga kune vanogamuchira 'zvisina basa' maforodha, zvichireva kuti maemail ako anozotumirwa hunyanzvi uye kununurwa, asi hazvizoonekwe.
Pano paHubSpot, takazvinyora nemaune vanhu mazana maviri nemakumi mashanu kubva kuHubSpot's Marketing Blog, yaisanganisira vanhu vaive vasarudza kugamuchira maemail nezvezvinhu zvitsva zvatakaburitsa pa blog. Kuchenesa uku kwakaunza huwandu hwedu hwevanyori kubva pa250,000 kudzika ku550,000. Verenga iyi blog post kuti udzidze zvakawanda nezve nei uye sei isu takanatsa yedu vanonyoresa rondedzero, uye nei iwe ungafunga kuita zvakafanana.
Nhamba yeNew (kana Hurefu) Inotungamirwa Inogadzirwa
Pamwe pachinzvimbo chekutarisa kune vanonyorera, iwe ungade kushanda pane inokura chizvarwa chinotungamira. Kana zvirizvo, iwe unofanirwa kuve kutumira email izvo zvinopa kutungamira chizvarwa zvemukati - mune mamwe mazwi, zvemukati zvinoda kuti muoni azadze fomu yekutungamira yekubata kuti azviwane.
Kana icho chinangwa chekushambadzira chako cheemail chiri lead gen, iwe unofanirwa kunge uchiteedzera kuti mangani mafambiro auri kubata zuva rega rega, uye mwedzi wega wega. Iwe unogona kusarudza kutarisisa pane ese anotungamira akagadzirwa, kana chete matsva akawedzerwa kune yako dhatabhesi, zvinoenderana nezvaunokoshesa.
Tungamira-kune-Mutengi Shanduko Rate
Chekupedzisira, ngatiti iwe unoda kutarisisa zvakanyanya kutarisana nepakati / pazasi peyako yekushambadzira, uye shandura zvimwe zvezvenzira zvako zviripo kuva vatengi. Kana ichi chiri chinangwa chako, maemail auri kutumira anogona kunge achipa zvirimo zvine hukama zvakanyanya nebhizinesi rako uye chigadzirwa chako kana sevhisi. Kudanwa kwako-kune-chiito kunogona kusanganisira "Tora demo," "Tarisa Vhidhiyo yeYedu Chigadzirwa Mukuita," kana "Tanga Mahara Muedzo." Kana ichi chiri chinangwa chako, iwe unofanirwa kunge uchiteedzera shanduko mune yako inotungamira-kune-mutengi shanduko chiyero.
Sezviri pachena sekunge zvese izvi zvinoita, iwe ungashamisika kuti vangani email vatengesi vanoona zvinangwa zvavo uyezve usazvinetsere kuona kufambira mberi kwavo kunopesana navo. Ita shuwa kuti iwe unokwanisa kuteedzera kuti uri padhuze zvakadii kuenda kuchinangwa chako chero nguva mukati memwedzi, uye kuti uri kutarisa nokungwarira chero shanduko mune aya metric mwedzi pamusoro pemwedzi.
Kufamba neyeMaketi yekutengesa Email
Chinokosha? Iva nehungwaru pamusoro pemametric auri kuteedzera, uye ita shuwa kuti unokwanisa kubudirira kuyera yako yega email yekuita, hutano hwe email yako runyorwa, uye kufambira mberi kwako kune ako makuru ekutarisa zvinangwa. Chero bedzi iwe uchikwanisa kuona yega yeaya, iwe uri munzira chaiyo yekushambadzira email zvakanyanya.
YeMupepeti Chiziviso: Iyi posvo yakatanga kuburitswa munaKurume 2014 uye yakagadziridzwa kurongeka uye kukwana.